Otú Ị Ga-esi Nyere Enyi Gị Gbara Alụkwaghịm Aka
GỤỌ NKE Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bengali Bicol Bislama Bulgarian Cambodian Catalan Cebuano Chichewa Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitumbuka Cibemba Croatian Czech Danish Drehu Dutch Efik English Estonian Ewe Fijian Finnish French Ga Georgian German Greek Greenlandic Guarani Gujarati Gun Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hindi Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kannada Kazakh Kikaonde Kikuyu Kiluba Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Kongo Korean Kwangali Kwanyama Latvian Lingala Lithuanian Luganda Lunda Luo Luvale Macedonian Malagasy Malay Malayalam Maltese Marathi Maya Ndebele Ndonga Nepali Ngabere Norwegian Nzema Oromo Ossetian Otetela Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Persian Polish Portuguese Punjabi Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Romanian Russian Sango Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Silozi Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swati Swedish Tagalog Tahitian Tamil Tatar Telugu Thai Tigrinya Tshiluba Tsonga Turkish Twi Tzotzil Ukrainian Urdu Uzbek Venda Vietnamese Wallisian Waray-Waray Wolaita Xhosa Yoruba Zulu
Ọtụtụ ndị na-agba alụkwaghịm taa. N’ihi ya, o nwere ike ịbụ na ị ma onye gbara alụkwaghịm. Dị ka ihe atụ, ihe a chọpụtara na Poland gosiri na ọtụtụ ndị dị afọ iri atọ ha na di ha ma ọ bụ nwunye ha birila afọ atọ ruo afọ isii nwere ike ịgba alụkwaghịm. Ma, ọ bụghị naanị ndị dị afọ ole ahụ na-agba alụkwaghịm.
Ụlọ ọrụ na-ahụ maka ihe gbasara ezinụlọ na Spen kwuru na e kee ndị na-agba akwụkwọ na Yurop ụzọ abụọ, otu ụzọ ga-agba alụkwaghịm. Otu ihe ahụ na-emekwa n’obodo ndị ọzọ mepere emepe.
O NWEGHỊ ỤDỊ IHE NA-AGAGHỊ ABATA ONYE AHỤ N’OBI
Gịnị ka ịgba alụkwaghịm na-akpatakarị? Otu nwaanyị bụ́ aka ochie n’ịdụ ndị lụrụ di na nwunye ọdụ n’Ebe Ọwụwa Anyanwụ Yurop kwuru, sị: “Ịgba alụkwaghịm na-eme ka ọhaneze mata na di na nwunye enweela nsogbu, ya bụ na ha etisaala ma biri iche iche. Ọ bụ ihe na-agbawa obi.” O kwukwara na ịgba alụkwaghịm na-akpatakarị iwe, mwute, ịkwa mmakwaara, na ihere. Ọ na-emekwa ka ọsụkọsụ na-asụ ndị ahụ gbara alụkwaghịm. Mgbe ụfọdụ, ọ na-eme ka otu n’ime ha chọwa igbu onwe ya. Nwaanyị ahụ kwuru, sị: “Ọ bụrụ na ụlọikpe emechaa kweta ka di na nwunye gbaa alụkwaghịm, nsogbu ọzọ na-amalite. Ọ ga na-adị onye ahụ ka ò nwere ihe pụrụ ya n’ahụ́ nakwa ka ọ̀ bụ onye a jụrụ ajụ. O nwere ike ịna-eche, sị: ‘Ugbu a m gbara alụkwaghịm, ọ̀ ka nwere uru m bara? Olee isi ndụ m dị?’”
Otu nwaanyị aha ya bụ Ewa kwuru otú obi dị ya mgbe ya na di ya gbara alụkwaghịm afọ ole na ole gara aga. Ọ sịrị: “Mgbe anyị gbachara alụkwaghịm, ihere megburu m emegbu n’ihi na ndị agbata obi m na ndị mụ na ha na-arụkọ ọrụ na-akpọzi m ‘onye a gbara alụkwaghịm.’ Iwe juru m obi. Ọ bụ naanị mụ na ụmụ m abụọ bi mgbe ahụ, mụ abụrụ ma papa ha ma mama ha.” * E nwere otu nwanna aha ya bụ Adam. Ọ bụ okenye ruo afọ iri na abụọ. Ndị mmadụ na-akwanyere ya ùgwù. O kwuru, sị: “O nweghịzi ihe ndị mmadụ ji m kpọrọ. N’ihi ya, iwe na-eju m obi mgbe ụfọdụ. O nwekwara mgbe ọ na-adị m ka m nọọrọ onwe m.”
IHE MERE O JI ESIRI ỤFỌDỤ NDỊ IKE INWETA ONWE HA
Ụfọdụ ndị gbara alụkwaghịm na-achị obi n’aka n’ihi na ha amaghị otú ihe ga-adịrị ha n’ọdịnihu. Ọ na-esikwara ha ike inweta onwe ha ọ bụrụgodị na ọtụtụ afọ agaala kemgbe ha gbara alụkwaghịm. Ha nwere ike iche na o nweghị onye chọrọ ịma ma hà dị ndụ ma hà nwụrụ anwụ. Otu onye na-ede gbasara ịgba alụkwaghịm n’akwụkwọ akụkọ kwuru na mmadụ gbaa alụkwaghịm, ‘onye ahụ ga-agbanwe àgwà ya, mụwakwa otú naanị ya ga-esi na-edi nsogbu ndị bịaara ya.’
Otu nwanna aha ya bụ Stanisław kwuru, sị: “Mgbe anyị gbachara alụkwaghịm, nwunye m ekweghị ka m na-ahụ ụmụ nwaanyị abụọ anyị mụtara. N’ihi ya, amalitere m iche na o nweghịzi onye hụrụ m n’anya nakwa na Jehova ahapụla m. Ndụ gbụrụ m. Ma, emechara m ghọta na ihe ahụ m na-eche abụghị eziokwu.” E nwere otu nwaanyị aha ya bụ Wanda. Ya na di ya gbara alụkwaghịm, ya achịrị obi n’aka n’ihi na ọ maghị otú ihe ga-adịrị ya n’ọdịnihu. O kwuru, sị: “Obi m gwara m na obere oge, ụmụnna na ndị ọzọ agaghị achọ ịma ihe ọ bụla gbasara mụ na ụmụ m. Ma ugbu a, ahụla m otú ụmụnna si na-akpa anyị nso ma na-enyere m aka ná mbọ m na-agba ịzụ ụmụ m ka ha nwee ike ịna-efe Jehova ma ha too.”
Ihe ụmụnna ndị a kwuru gosiri na obi anaghị adị ụfọdụ ndị mma ma ha gbachaa alụkwaghịm. Ha nwere ike ịna-ele onwe ha anya otú na-ekwesịghị ekwesị, na-eche na ha abachaghị uru nakwa na o nweghị onye kwesịrị ịna-ajụ ase ha. Ha nwekwara ike ịna-akatọ ihe ọ bụla mmadụ mere. O nwere ike ime ka ha chewe na ọgbakọ ahụghịzi ha n’anya nakwa na ihe banyere ha anaghị emetụ ụmụnna n’obi. Ma, ihe ahụ a kọrọ gbasara Stanisław na Wanda gosiri na ndị gbara alụkwaghịm nwere ike imecha ghọta na ihe banyere ha na-emetụ ụmụnna n’obi. Nke bụ́ eziokwu bụ na ụmụnna na-enyere ha aka, ọ bụrụgodị na ha amataghị ná mmalite na a na-enyere ha aka.
Ọ GA NA-ADỊ ONYE AHỤ KA À JỤRỤ YA AJỤ
Ihe anyị kwesịrị iburu n’obi bụ na n’agbanyeghị otú anyị si agbalị inyere ụmụnna gbara alụkwaghịm aka, o nwere ike ịdị ha mgbe ụfọdụ ka à hapụrụ naanị ha. Ụmụnna nwaanyị gbara alụkwaghịm nwere ike ịna-eche na ọtụtụ ndị achọghị ịma ma hà dị ndụ ma hà nwụrụ anwụ. Otu nwanna nwaanyị aha ya bụ Alicja kwuru, sị: “Afọ asatọ agaala kemgbe anyị gbara alụkwaghịm. Ma, ọ ka na-adị m mgbe ụfọdụ ka abachaghị m uru. Mgbe ọ bụla ọ dị m otú ahụ, m na-anọrọ onwe m, bee ezigbo ákwá ma na-akwa ụwa m.”
Ọ bụ eziokwu na obi nwere ike ịna-ajọ onye gbara alụkwaghịm njọ, Baịbụl kwuru na mmadụ ekwesịghị ịna-akpa iche. Ọ bụrụ na mmadụ akpawa iche, o nwere ike ime ka ọ jụ “ezi amamihe.” (Ilu 18:1) Ma, ọ bụrụ na ọ na-adị mmadụ ka o nweghị onye ihe gbasara ya na-emetụ n’obi, onye ahụ kwesịrị ịghọta na ya ekwesịghị ịna-aga ugboro ugboro ka onye na-abụghị nwoke ibe ya ma ọ bụ nwaanyị ibe ya dụọ ya ọdụ ma ọ bụ kasie ya obi. Ọ bụ otú ahụ ka ọ ga-esi gosi na ya nwere ezi amamihe n’ihi na ọ ga-eme ka onye ahụ ghara iri ya obi.
Nwanna gbaa alụkwaghịm, o nweghị ụdị ihe na-agaghị abata ya n’obi. O nwere ike ịna-achị obi n’aka n’ihi na ọ maghị ihe ga-eme echi. O nwekwara ike ịna-adị ya ka ọ̀ bụ onye a jụrụ ajụ. Ebe anyị ghọtara na ọ bụ otú obi na-adị ụdị onye ahụ, ghọtakwa na ọ naghị adị mfe, anyị kwesịrị iji obi anyị niile na-akwado ya, si otú ahụ gosi na anyị na-eme ka Jehova. (Ọma 55:22; 1 Pita 5:6, 7) Ka obi sie anyị ike na obi ga-adị onye ahụ ụtọ ma ọ bụrụ na anyị esi n’ụzọ ọ bụla nyere ya aka. Ọ ga-eme ka ọ ghọta na e nwere ezigbo ndị enyi na-enyere ya aka n’ọgbakọ.—Ilu 17:17; 18:24.
Otú I Kwesịrị Isi Na-ele Ịgba Alụkwaghịm Anya
Anyị bụ́ ndị ohu Jehova anaghị eji alụmdi na nwunye egwuri egwu n’ihi na anyị na-eme ihe Baịbụl kwuru. Dị ka ihe atụ, na Malakaị 2:16, Chineke kwuru hoo haa na ya “kpọrọ ịgba alụkwaghịm asị.” Naanị ihe Baịbụl kwuru nwere ike ime ka mmadụ gbaa alụkwaghịm bụ ma di ya ma ọ bụ nwunye ya kwaa iko. N’ihi ya, ọ ga-ajọgbu onwe ya ma mmadụ chewe otú ọ ga-esi gbaa di ya ma ọ bụ nwunye ya na-akwaghị iko alụkwaghịm, ma eleghị anya, ya abụrụ na ọ gbawala mbọ ka ọ lụọ onye ọzọ.—Jen. 2:22-24; Diut. 5:21; Mat. 19:4-6, 9.
Ma, ọ bụrụ na nwanna agbaa alụkwaghịm n’ihi na di ya ma ọ bụ nwunye ya kwara iko, ụmụnna ga na-akwado ya. Ha na-eme ihe niile ha nwere ike ime ka ha nyere ndị ezi omume “e gburu mmụọ ha” aka. Ha si otú ahụ egosi na ha na-eme ka Jehova.—Ọma 34:15, 18; Aịza. 41:10.
OLEE OTÚ I NWERE IKE ISI NYERE YA AKA?
Ì nwere ike inyere onye gbara alụkwaghịm aka? Gịnị ka ị ga-eme ka i nwee ike inyere ụdị ndị ahụ anyị kọrọ gbasara ha n’isiokwu a aka? Ka anyị lee ihe Baịbụl kwuru. Ị ga-ahụ otú ezigbo Ndị Kraịst si nyere ụdị ndị ahụ aka.
Gee ya ntị nke ọma. (Ilu 16:20, 23)
I kwesịrị ịghọta na ọ bụrụ na mmadụ agbaa alụkwaghịm, o nwere ike ọ gaghị achọ ịkọrọ ndị ọzọ ihe mere o ji gbaa alụkwaghịm. Nke bụ́ eziokwu bụ na ọ bụrụgodị na mmadụ ekwuo ihe niile na-enye ya nsogbu n’obi, o nwere ike ọ gaghị abara ya uru. O nwekwara ike ọ gaghị eme ka ọ kwụsị ichegbu onwe ya. (Ilu 12:25; Rom 12:15) N’isiokwu a, anyị kwuru gbasara otu nwanna aha ya bụ Adam. Mgbe ya na nwunye ya gbachara alụkwaghịm, otu nwanna aha ya bụ Michał nyeere ya aka. Michał kwuru na anyị nwere ike iwetu obi gee onye gbara alụkwaghịm ntị, ọ bụrụgodị na ọ gwaghị anyị ihe niile merenụ. O kwuru, sị: “Agbara m mbọ mee ka Adam ghọta na mgbe ọ bụla obi na-adịghị ya mma, o nwere ike ọ gaghị ama mgbe ọ ga-agwa m ihe ọ ga-emecha kwaara mmakwaara.” N’ihi ya, Michał mere ka ọ ghọta na mkpa ya abụghị ka ọ kọọrọ ya ihe niile. Michał gere ya ntị nke ọma otú ezigbo enyi si ege enyi ya ntị. Tupu a malite ọmụmụ ihe ma ọ bụkwanụ mgbe a gbasara, anyị nwere ike inyere onye gbara alụkwaghịm aka ma ọ bụrụ na anyị agakwuru ya jụọ ya, sị: “Olee otú ị dị taa?” Anyị nwekwara ike ime ka ọ ghọta na anyị ma na ọ dịghịrị ya mfe nakwa na anyị kwụ ya n’azụ.
Mee ka ọ ghọta na ihe banyere ya na-emetụ gị n’obi. (Fil. 2:4)
Otu nwanna aha ya bụ Mirosław kwuru, sị: “Mụ na nwunye m wepụtara oge gaa nyere otu nwanna nwaanyị gbara alụkwaghịm aka. Dị ka ihe atụ, anyị nyere aka rụziere ya ugodi ụzọ ya. Anyị bugakwara ya ụlọ ọgwụ ka ọ gaa hụ dọkịta.” O nwere ike ịdị ka ihe ndị ahụ abụghị oké ihe. Ma, ha bụ ihe ga-abara ya uru. Ha bakwaara ya uru. Nwanna nwaanyị ahụ ha nyeere aka ji nwayọọ nwayọọ nweta onwe ya. O mechara malite ịsụ ụzọ, e meekwa nwa ya nwaanyị dị afọ iri na otu baptizim.
Mee ka onye gbara alụkwaghịm ghọta na Jehova ma ihe ya na ya na-alụ.
Ọ bụrụ na mmadụ chere na ya abaghịzi uru, i nwere ike ime ka ọ ghọta na Jehova anaghị eji onye ọ bụla na-ejere ya ozi egwu egwu. Anyị “dị oké ọnụ ahịa karịa ọtụtụ nza.” Anyị bara ezigbo uru n’anya Chineke. (Mat. 10:29-31) “Jehova na-enyocha obi.” N’ihi ya, ọ ma otú obi dị ndị gbara alụkwaghịm. Ọ gaghị ahapụ onye ọ bụla ji obi ya niile na-ejere ya ozi. (Ilu 17:3; Ọma 145:18; Hib. 13:5) N’ihi ya, ị gaa ịkasi onye gbara alụkwaghịm obi, mee ka ọ ghọta na obi dị Chineke ụtọ na ọ hụrụ eziokwu n’anya ma na-akwado ofufe ya.—Fil. 2:29.
Gbaa onye gbara alụkwaghịm ume ka ọ nọsie ike n’ọgbakọ.
Ọ na-esiri ụfọdụ ndị ike ịga ọmụmụ ihe ma ọ bụrụ na obi adịghị ha mma. Ma, ịga ọmụmụ ihe na-eme ka okwukwe anyị sie ike. Ọ na-emekwa ka a kasie anyị obi ma ‘wulie anyị elu.’ (1 Kọr. 14:26; Ọma 122:1) N’ihi ya, ọ bụrụ na ndị okenye agbaa mbọ inyere onye gbara alụkwaghịm aka, ọ ga-aba ezigbo uru. N’isiokwu a, anyị kwuru gbasara otu nwanna nwaanyị aha ya bụ Wanda. O kwuru banyere ndị okenye, sị, “Anyị ka na-echeta otú ha si jiri obiọma nyere anyị aka.”
Gbaa onye gbara alụkwaghịm ume ka ọ na-ekpe ekpere, na-amụ ihe ma na-echebara ihe ọ na-amụ echiche. O mee ihe ndị a, ya na Chineke ga-adịkwu ná mma. (Jems 4:8)
Jehova bi n’eluigwe, bụrụkwa Onye Pụrụ Ime Ihe Niile. Ma, ọ na-ahụ ‘onye ihe na-enye nsogbu n’obi, onye nwere mwute na mmụọ ya, na onye na-ama jijiji n’ihi okwu ya.’ Mee ka onye gbara alụkwaghịm ghọta ihe a Baịbụl kwuru. Gwakwa ya na ọ ga-abara anyị niile uru ma ọ bụrụ na anyị ana-ekpe ekpere, na-amụkwa ihe, si otú ahụ mee ka anyị na Chineke dịkwuo ná mma.—Aịza. 66:2.
Gwa ya ka gị na ya rụọ n’ozi ọma ma ọ bụkwanụ ka unu abụọ mụkọọ ihe a ga-amụ n’ọmụmụ ihe.
Ọ ga-eme ka obi na-esikwu ya ike n’agbanyeghị nsogbu bịaara ya. E nwere otu nwanna nwaanyị ji ofufe Jehova kpọrọ ihe. Mgbe ya na di ya gbara alụkwaghịm, obi kooro ya n’elu. Ma, otu nwanna nwaanyị aha ya bụ Marta nyeere ya aka. Marta kwuru, sị: “Mụ na ya na-arụkarị n’ozi ọma. Obi na-adị anyị ụtọ mgbe ọ bụla anyị mere ihe anyị kpebiri ime n’ozi Jehova. Mgbe ụfọdụ, anyị na-amụkọ ihe a ga-amụ n’ọmụmụ ihe. Anyị mụchaa, anyị esie ezigbo nri rie.”
Text Họrọ ụdị nke ị ga-adanlodu ỤLỌ NCHE (NKE A NA-AMỤ AMỤ) Jun 2014